Shirka Jowhar oo aan wali furmin iyo caqabad kale oo ku soo fool leh | Gaaloos.com
Home » News » Shirka Jowhar oo aan wali furmin iyo caqabad kale oo ku soo fool leh
Shirka Jowhar oo aan wali furmin iyo caqabad kale oo ku soo fool leh
Shirka Maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ee maanta lagu wado inuu furmayo ayaa la sheegayaa inuu baaqday, iyadoo uu soo baxayo khilaaf cusub oo ku aadan habka maamul u sameynta labada Gobol.
Wararka aanu ka heleyno magaalada ayaa sheegaya in aanu muuqan wax furitaan ah oo shirka ah, waxaana soo baxaya warar sheegaya in maalinta berri oo Axad ah uu furmi doono.
Xukuumadda Soomaaliya iyo IGAD ayaa todobaadkii hore sheegay in shirka Jowhar uu furmi doono 3-da bisha September oo maanta ku beegan.
Wariyeyaal ku sugan Jowhar ayaa soo sheegaya in hoolka shirka aanay wali ergooyinka labada gobol soo fariisan, walina aanay magaalada imaan wax wafuud ah.
Sidoo kale Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Dhexe Cali Guudlaawe Xuseen ayaa magaalada Jowhar ka maqan, isagoo ku sugan magaalada Muqdisho
Ciidamo gaar ah oo isugu jira Boolis iyo Nabadsugid oo gaaray magaalada Jowhar ayaa la sheegayaa inay ka qeyb qaadanayaan sugida amniga xarunta shirka uu ka dhacayo, waxaana xiran waddooyinka soo gala xarunta iyo meelaha qaar.
Ilo lagu kasoonaan karo ayaa Jowhar.com u xaqiijiyay in wafuuda ugu badan ay maalinta berri tagi doonaan magaalada Jowhar, si shirka loo furo.
Waxaa soo baxaya khilaaf cusub oo ku aadan habka awood qeybsiga maamulka, iyadoo la sheegayo in IGAD ay dooneyso inay wax ka bedesho qaabka awood qeybsiga maamulka ee horay loo dejiyay, waxaana soo baxaya warar sheegaya in Madaxweynaha Maamulka la siin doono Gobolka Hiiraan, halka Caasimadana la siinayo Shabeellaha Dhexe.
Title: Shirka Jowhar oo aan wali furmin iyo caqabad kale oo ku soo fool leh